Kwenzekani kusayithi lakho khona manje? | Martech Zone
Kwenzekani kusayithi lakho khona manje?
NgoMsombuluko, Agasti 15, 2011 NgoLwesine, ngo-Okthoba 27, 2011 Douglas Karr
Iningi lamakhasimende ethu libuyekeza lawo analytics nsuku zonke noma masonto onke. Ngezinye izikhathi, bayamangala ngemiphumela. Mhlawumbe bekukhulunywa kwenye ibhulogi, ukushicilelwa noma isayithi lokubekisa umphakathi. Inkinga ukuthi abayiboni manje… Bakubona emva kwamahora ayi-8 kuya kwangama-24 ngemuva komcimbi.
Ukumaketha okuningi kumayelana nesikhathi namandla. Kusasa kuvame ukuba sekwephuzile kakhulu ukuzama ukwelula isiphikisi esiminyaminyeni sezimoto. Ngesikhathi oyibona kuphakeji yakho yezibalo, sekuphelile. Isikhathi sangempela analytics kuyisihluthulelo saleli qhinga. Ukutshala imali ngesikhathi sangempela analytics umkhiqizo onjenge Phinda uvuselele (Bengingumsebenzisi osungula i-Reinvigorate - esanda kuthengwa yikhasimende lethu Webtrends) ingakunikeza ngolwazi oludingayo.
Izindleko zesicelo esinjengalezi ziyabizwa .. kusuka ku- $ 10 ngenyanga. Leyo yintengo encane enikezwe ezinye zezici. Ukwazi ukubona ukuthi bangaki abantu abavakashela isiza sakho njalo ngehora, amamephu wokushisa womsebenzi wabo, ukulandelela umsebenzi wabo kusayithi, ngisho nokubona umsebenzi wezivakashi oqanjwe kusayithi.
Ukuhlonza umsebenzi osendaweni yakho ngesikhathi sangempela kungakunika imininingwane odinga ukuyenza ngokushesha izinguquko, yelula ama-spikes kudatha ngokwenza ngokushesha okunye ukukhushulwa, ukuguqula okuqukethwe okungasebenzi ngaphakathi kwamahora wokukushicilela… uhlu luyaqhubeka nokuqhubeka.
Ucwaningo Luthi: Isikhathi Esichithwe Kwezokuxhumana Komphakathi yi-Time Well Spent
Aug 19, 2011 ku-4: 16 AM
Siyabonga ngokushiwo uDoug. Sonke siyisidina ngakho. Umakiwe kubhulogi yethu nayo muva nje futhi kumnandi kakhulu. Angisakwazi ukulinda ukuze uwuthole umkhankaso omusha ozoqala ngokuzayo! Jabulela usuku lwakho.
Aug 19, 2011 ku-4: 26 AM
Yipulatifomu enhle futhi igcwalisa igebe elincanyana ezinhlelweni zemikhiqizo iWebtrends manje enayo. Nina bantu niyamangalisa!